Esi eme ka WhatsApp gaa SD: jiri nchekwa dị na mpụga ma ọ bụghị mkpanaka gị | Akụkọ akụrụngwa
Izipu ozi ngwa dị ebe a iji nọrọ ma taa ha abụrụla ngwa ọrụ ndị ọrụ ji wee zipu ozi na kpọọ oku ma ọ bụ kpọọ vidiyo, ma ọ dịkarịa ala n'etiti ngwa ndị na-enye ọrụ a, dị ka ọ dị banyere ikpo okwu eze nwanyị na ụwa nke ekwentị: WhatsApp.
Dabere na ngwaọrụ anyị ji eme ihe na dịka nhazi anyị guzobere, ekwentị anyị nwere ike mejupụta ngwa ngwa, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị bụ akụkụ nke nnukwu ìgwè dị iche iche, otu ebe a na-ekerịta vidiyo na foto n'ọtụtụ buru ibu. Ọ bụrụ na ebe nchekwa nke ngwaọrụ anyị jupụtara, a manyere anyị kpalie WhatsApp na SD.
Mana ọ bụghị ngwaọrụ niile nwere ụdị nsogbu a, ebe ọ bụ na Apple iPhones enweghị nhọrọ iji gbasaa ohere nchekwa dị n'imeYa mere, naanị otu ụzọ isi wepụ ọdịnaya site na ọdịnaya nke WhatsApp bi bụ site ihichapụ ya na ngwaọrụ ma ọ bụ wepu ya site na ijikọ iPhone na kọmputa na iTunes.
Otú ọ dị, gam akporo ọnụ ha enweghi nsogbu mgbe obula igbasa ohere nchekwa, Ebe ọ bụ na ọnụ ọnụ niile ahụ na-enye anyị ohere ịgbasa ya site na kaadị microSD, nke na-enye anyị ohere ịmegharị ụdị ngwa ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla na kaadị iji hapụ ohere dị n'ime ọdụ ahụ, ohere dị mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
1 Bugharịa WhatsApp na kaadị SD
1.1 Na njikwa faili
2 Ndụmọdụ iji chekwaa ohere na WhatsApp
2.1 Lelee ntọala WhatsApp
2.3 Na-enyocha foto foto mgbe niile
2.4 Jikwaa ọnụọgụ nke otu ndị edebanyere aha anyị
Mgbe ị na-etinye ngwa na gam akporo, etinyere ha n'ime sistemụ ahụ, site na iru nke ndị chọrọ ịmata ihe, yabụ anyị agaghị enwe ike ịnweta faịlụ ngwa ahụ, belụsọ ma anyị nwere ihe ọmụma dị mkpa. Na ụzọ ala, oge ọ bụla anyị wụnye WhatsApp na njedebe gam akporo anyị, a na-emepụta folda a na-akpọ WhatsApp na ndekọ ndekọ nke ọdụ anyị, a nchekwa ebe niile ọdịnaya natara na ọnụ na-echekwara.
Ruo afọ ole na ole, gam akporo enyela anyị ohere ịkwaga ụfọdụ ngwa na kaadị SD, nke mere na oghere dị mkpa iji rụọ ọrụ bụ nke kaadị ebe nchekwa. O di nwute na, nnọọ ole na ole bụ ngwa na hapụ anyị ka anyị bugharịa data na kaadị SD, na WhatsApp abụghị otu n'ime ha, yabụ a ga-amanye anyị iji ụzọ ndị ọzọ aka.
Na njikwa faili
Bugharịa dum nchekwa aha WhatsApp na kaadị ebe nchekwa bụ a nnọọ mfe usoro na-achọ nta ihe ọmụma si ọrụ. Naanị ị chọrọ ihe njikwa faili, gaa na ndekọ mgbọrọgwụ nke ọdụ anyị, họrọ folda WhatsApp wee belata ya.
Ọzọ, ọzọ na-eji njikwa faili ahụ, anyị na-aga na mgbọrọgwụ ndekọ nke kaadị ebe nchekwa wee mado folda ahụ. Usoro a nwere ike iwe ogologo oge, dabere na oghere nke ndekọ a na-ebi ugbu a na ngwaọrụ anyị. Ọ ga-adabere na ọsọ nke kaadị microSD anyị na-eji.
Ozugbo emechara usoro ahụ, ọdịnaya niile anyị chekwara na folda WhatsApp ga-adị na kaadị ebe nchekwa, nke na-enye anyị ohere ịhapụ nnukwu ohere na kọmputa anyị. Mgbe anyị meghere ngwa WhatsApp, a na-akpọ folda a na-akpọ WhatsApp ọzọ na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ nke ngwaọrụ anyị, ebe ọ bụ na anyị mere naanị data echekwara nke ngwa ahụ, ọ bụghị ngwa ahụ n'onwe ya.
Nke a manye anyị ka anyị na-arụ ọrụ a oge niile, karịsịa mgbe ọnụ na-amalite na-adọ anyị aka ná ntị na ebe nchekwa dị n'okpuru nkịtị. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e nwere ọtụtụ ndị nrụpụta nke na-enye anyị onye njikwa faịlụ, yabụ na ọ dịghị mkpa ịbanye na Google Play iji nwee ike ibugharị WhatsApp na kaadị SD.
Ọ bụrụ na ọnụ gị enweghị onye njikwa faịlụ, otu n'ime ihe kacha mma dị ugbu a na Playlọ Ahịa Google bụ ES File Explorer, njikwa faili nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ yana faịlụ n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa, ọ bụ ezie na ihe ọmụma nke ndị ọrụ pere mpe.
Njedebe File Explorer
Ọ bụrụ na anyị achọghị ibudata ngwa nke anyị na-agaghị eji na kọmputa anyị, ma ọ bụ onye njikwa faịlụ ahụ gụnyere na ọdụ anyị dị mgbagwoju anya karịa ka ọ nwere ike iyi, anyị nwere ike ịhọrọ ịmegharị ọdịnaya WhatsApp na kaadị SD site na kọmputa. Iji mee nke ahụ, anyị ga - ejikọ ekwentị anyị na kọmpụta anyị ma jiri ya Nyefee faịlụ gam akporo.
Gam akporo Njikwa Nyefee bụ ngwa na Google na-etinye anyị n'aka anyị n'ụzọ kpamkpam enwerela onwe ya na nke anyị nwere ike iji nyefee ọdịnaya site na akụrụngwa anyị na smartphone ma ọ bụ nke ọzọ na enweghị nsogbu ọ bụla yana oke ọsọ. Ozugbo anyị jikọtara akụrụngwa anyị na smartphone, ngwa ahụ ga-amalite na akpaghị aka. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-pịa na akara ngosi igbu ya.
Ngwa ahụ ọ ga-egosi anyị njikwa faili na ọdịnaya niile nke ama anyị, ọdịnaya anyị nwere ike belata na mado ma na kọmputa anyị yana na kaadị ebe nchekwa nke ọnụ anyị, nke ngwa ahụ nwekwara ohere. Iji mee ka ọdịnaya WhatsApp gaa na kaadị SD, anyị ga-aga na folda WhatsApp ma jiri bọtịnụ aka nri pịa Cut.
Ọzọ, anyị na-aga na kaadị SD, site na ngwa ahụ n'onwe ya na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ anyị pịa-nri ma họrọ Tapawa. Ọ bụrụ na oyiri a na mado ya adịtụ mgbagwoju anya, anyị nwere ike naanị ịdọrọ folda WhatsApp ahụ site na ebe nchekwa dị n'ime ngwaọrụ na kaadị SD nke ya. Ogologo oge usoro a ga-adabere na ọsọ nke kaadị na nha ndekọ ahụ. Nkọwa nke akụrụngwa nke anyị ji arụ ọrụ a adịghị emetụta ọsọ nke usoro ahụ.
Ndụmọdụ iji chekwaa ohere na WhatsApp
Lelee ntọala WhatsApp
Tupu ịmalite ịkwaga ọdịnaya WhatsApp, anyị ga-anwa igbochi kọmputa anyị ka ọ ghara ijupụta vidiyo na foto ngwa ngwa. Iji mee nke a, anyị ga-aga nhọrọ nhazi nke WhatsApp yana n'ime ngalaba ahụ Akpaghị aka na nbudata nke multimedia họrọ na Vidio Mgbe.
N'ụzọ dị otú a, anyị agaghị enwe ike ịchekwa na ọnụego mkpanaka anyị, mana anyị ga-egbochikwa vidiyo, ụdị faịlụ nke kachasị ohere, na-akpaghị aka na nbudata na ngwaọrụ anyị ọ bụ ezie na anyị enweghị mmasị na opekata mpe.
Otu nhọrọ iji hụ vidiyo ndị ezigara n'otu n'ime otu ndị anyị nọ na ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha dị ọtụtụ n'ụdị faịlụ a, bụ iji kọmputa site na WhatsApp Web. Mgbe ị na-abanye na WhatsApp Web, ọdịnaya niile anyị na-ebudata na kọmputa anyị ga-echekwa, ya mere ọ gaghị adị mkpa ibudata ya na kọmputa anyị ka enwere ike ịgbakwunye ya na vidiyo ndị ọzọ na ohere nchekwa nke ngwaọrụ anyị ga-ebelata ngwa ngwa.
Na-enyocha foto foto mgbe niile
Ma na iOS na gam akporo, WhatsApp nwere obi ụtọ nke ịghara ịjụ anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmị vidiyo na foto na ngwaọrụ anyị, kama na ọ na-elekọta ya na akpaghị aka, nke na-akpata nke ahụ na oge, anyị otu oghere mbelata. Ọrụ a na-eme ka anyị tụlere gallery anyị site n'oge ruo n'oge iji kpochapụ vidiyo na foto niile anyị natara site na ngwa izipu ozi ahụ dịkwa na ngwa ahụ n'onwe ya.
Ngwa ndị ọzọ, dị ka Telegram, na-enye anyị ohere ịhazi ngwa ahụ ka ọdịnaya niile anyị nwetara echekwala ozugbo na gallery anyị, nke na-enye anyị ohere ịchekwa n'ime ya, naanị foto na vidiyo ndị anyị chọrọ n'ezie. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere iwepụ ọdịnaya niile echekwara na oghere ngwa ahụ, iji belata nha ya na ngwaọrụ anyị.
Jikwaa ọnụọgụ nke otu ndị edebanyere aha anyị
WhatsApp dị iche iche bụ isi nsogbu mgbe ngwa anyị jupụtara ngwa ngwa na ọdịnaya ndị ọzọ anyị na-arịọghị, yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịghara ịbụ akụkụ nke otu ebe a na-eziga ọtụtụ ọdịnaya karịa ozi ederede, ọ bụrụhaala na ọ ga-ekwe omume.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu aga-esi bugharịa WhatsApp na kaadị SD
Autonomous Ready Spain, ọrụ ngo nke jikọtara Barcelona na ụgbọ ala kwurula
China na-ebido nyocha nke ọnwa dị anya